टाउकोको मोलकि तेलको मोल ? | Simpani
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृध्दिसंग जहिले पनि जोडिने कुरा आयल निगमलाई हुने घाटा हो । दोश्रो कुरा पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग गर्ने ग्राहकलाई सरकारले दिने सहुलियत । यथार्थमा यि दुवै मिथ्या हुन् र जनतालाई झुक्याउन प्रयोग गरिने शब्दावली ।
अमेरिकामा राज्य र संघीय वा केन्दि«य सरकारको गरेर प्रति ग्यालन मा झण्डै पचास सेन्ट अर्थात एक लिटरमा करिब १४ सेन्ट कर लाग्छ । (हेर्नुहोस १) । अहिले अमेरिकाको औसत मूल्य पेट्रोल लागि ९३ सेन्ट छ जुन विगत ७ महिनाको सबैभन्दा धेरै हो । (हेर्नुहोस २) ।
अमेरिकामा पेट्रालको होलसेल मूल्य प्रति लिटर ८० सेन्ट पर्दछ ।
भारतीय तेल कम्पनीहरुले इण्डियन आयल संग रिफाईनरीमा पेट्रोल किन्दा ने रु ७४।५४ तिर्छन् जबकि डिलरहरुले नेरु ७९ तिर्छन् । (हेर्नुहोस ३) ।
दिल्लीमा उपभोक्ताहरुले करिब नेरु ११७ तिर्छन जसमा एक्साइज कर (ने रु १४।७२), शिक्षा कर, डिलर कमीशन (नेरु ३।२०) र भ्याट (२० प्रतिशत) समेत जोडिन पुग्छ । (हेर्नुहोस ३)
आयल निगमले भारतसंग नेरु ८०।५३ मा पेट्रोल किनेको दाबी गर्छ । जबकि भारतीय कम्पनीहरुले त्यही प्रशोधन केन्द«बाट तेल रु ७४ मा किन्छन् । यो ६ रुपियाँको हिसाब कहाँ हरायो ?
त्यहि पेट्रोल निगमले जनतालाइ रु १४० मा बेच्छ ।
त्यसैगरि अयल निगमले डिजल नेरु ८६।६२ मा भारतसंग किन्छ र उपभोक्तालाई नेरु १०९ मा बेच्छ । जबकि त्यहि तेल भारतीय मार्केटिंग कम्पनीहरुले प्रशोधन केन्द्रबाट नेरु ७८।४० मा किन्छन् । (हेर्नुहोस ४)
सरकारले डिजेललाई दिएको रिनको ब्याजबापत रु ४ उठाउँछ र सरकारलाई रु ३५।८५ कर तिर्छ ।
त्यसोभए डिजलको ९ रुपियाँको हिसाब खै ? नेपालकै अयल निगमले किन भारतसग साधारण उपभोक्ताले जस्तै बजारकै मूल्यमा किन्छ ? कि अयल निगमले उपभोक्तालाई झुक्याउन खोजेको हो ? (हेर्नुहोस ५)
यहाँ घाटा कहाँ छ ?
घाटा तब देखा पर्छ जब परल मूल्यमा विभिन्न कर र अन्य अक्षमताका कारण उब्जने खर्च जोडिन्छ । त्यसकारण तेलको मूल्यको प्रश्न घाटाको प्रश्न नभएर कर नीति, भ्रष्टाचार र आयल निगमको क्षमताको प्रश्न हो ।
यसलाई रामेश्वरजी जस्ता नेताले बंग्याउनु भएन । कर कसरी निर्धारण गर्ने राजनीतिक र आर्थिक नीतिको प्रश्न हो । कर नीतिको आफ्नै लजिक हुन्छ जुन अर्थ शास्त्रीहरुले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसमाथि नेपालको ढुवानी र यातायातको लागि तेल नभै नहुने वस्तु हो ।
तुलना गर्दा पेट्रोलको कर प्रति लिटर अमेरिकामा १४ रुपिया, भारतमा रु ३४।६७ र नेपालमा रु ३५।८५ छ । भारतले डिजलमा जम्मा कर ने रु १५।९५ लिन्छ, जबकि नेपाल सरकारले कर रु १७ र ब्याज रु ४ लिन्छ ।
भारतमा डिजेलमा परल मूल्य र बजार मूल्य बीच केवल १० रुपिया फरक छ जबकि नेपालमा २३ रुपिया फरक छ । त्यस्तै भारतमा पेट्रोलको परल मूल्य र बजार मूल्य बीच ३३ रुपिया फरक छ जबकि नेपालमा ६६ रुपिया फरक छ । यो सहि तथ्याकको लागि भारतीय वेवसाइट नै हेर्नु पर्छ । (हेर्नुहोस ३) ।
नेपालमा कर, परल मूल्य र डिलर कमीशनबाहेकका खर्च थपिँदै गएका छन् । जसको भार नेपाली जनताको टाउकोमा नै थोपरिएको छ । यसबारे उपभोक्ता जागरुक हुन जरुरी छ ।
१ । http://www.api.org/oil-and-natural-gas-overview/industry-economics/~/media/Files/Statistics/state-motor-fuel-taxes-report-summary.pdf